​सीमा बाँधका विषयमा कुरा गर्न पूर्वप्रधानमन्त्रीको सुझाव
काठमाडौं । नेपाल-भारत सीमा क्षेत्रमा बनाएका बाँधका विषयमा भारतसँग निर्धक्क कुरा गर्न पूर्व प्रधानमन्त्रीहरुले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउलाई सुझाव दिएका छन् ।
बुधबार भारत भ्रमणमा जान लागेको प्रधानमन्त्री देउवाले शनिबार पूर्व प्रधानमन्त्रीहरुसँग कछलफल गरेका थिए । सो छलफलमा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुले तराईमा आएको बाढीले गरेको क्षति र....
​साहित्यकार हरिहर खनालका दुई कृति सार्वजनिक
काठमाडौँ । साहित्यकार हरिहर खनालका दुई कृति शनिबार सार्वजनिक भएका छन् । काठमाडौंमा एक विशेष कार्यक्रमको आयोजना गरीे नेपाली भाषाको ‘चिठीपत्रमा हरिहर खनाल’ र अंग्रेजी भाषाको ‘गोल्डेन ड्रिम एण्ड द ल्यारो ल्यान’ नामक दुई कृति सार्वजनिक भएका हुन् ।
२१२ पृष्टमा तयार भएको चिठीपत्रको....
​करिब १२ लाख मतदाता थपिए, प्रदेश नं. २ मा भने भोट हाल्न नपाउने
काठमाडौं । एक महिनाको समयावधीमा करिब १२ लाख मतदाताहरुले फोटो सहितको मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराएकाछन् । निर्वाचन आयोगले साउन १ गतेबाट एक महिनासम्म देशैभर मतदाता नामावली संकलन थालेको थियो । कतिपय स्थानीय तह तथा जिल्लामा भने भादै ३ गते सम्म पनि नाम संकलन गर्ने....
​आजदेखि पत्रकार महासङ्घको महाधिवेशन सुरु
काठमाडौं । आइतबार देखि नेपाल पत्रकार महासङ्घको २५ औँ महाधिवेशन सुरु हुँदैछ । महासङ्घका अध्यक्ष डा. महेन्द्र विष्टले काठमाडौंमा हुने उक्त महाधिवेशनको उद्धघाटन बिहान १० बजे प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाद्वारा हुने बताए ।
नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानमा शुरु हुने महाधिवेशनमा नयाँ नेतृत्व चयन हुनेछ । उक्त नेतृत्वका....
​पत्रकार महासंघको महाधिवेशन अन्तिम चरणमा, सबै जिल्लाबाट प्रतिनिधी जाँदै
न्यूजलय शनिबार ०३, भदौ २०७४
काठमाडौं । आइतबारबाट सुरु हुन लागेको नेपाल पत्रकार महासंघको २५औ महाधिवेशनको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । महाधिवेशनका लागि नेपालका विभिन्न जिल्लाबाट पत्रकारहरुको समुह काठमाडौं आउने क्रम जारी रहेको छ ।
काठमाडौंको नेपाल प्रज्ञा भवनमा हुने महाधिवेशनमा एक हजार पाँच सय भन्दा बढी प्रतिनिधिको....
​प्रधानमन्त्री देउवा बुधबार भारत जाने
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आगामी बुधबार भारत भ्रमणमा जाने भएका छन् । भारतको राजकीय भ्रमणमा नयाँदिल्ली जाने भएका हुन् ।
बिहीबार भारतका राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसहित भारत सरकारका उच्च अधिकारीसँग भेटवार्ता गर्ने कार्यतालिका रहेको छ । बिहीबार औपचारिक वार्तापछि हैदराबाद हाउसमा....
​बाढीपीडितका लागि भारतले गर्यो यस्तो घोषणा
काठमाडौं । बढीबाट प्रभावित बनेका पीडितहरुलाई भारतले राहत स्वरुप ४० करोड दिने घोषणा गरेको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबिच फोनमा भएको कुराकानीमा मोदीले यस्तो घोषणा गरेका हुन ।
प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले यस्तो घोषणा गरेका....
​नेपाली सेनाले ११ हवाइ साधन थप्ने
काठमाडौं । अमेरिकी अनुदान सहित केही हवाइ साधन नेपाली सेनाले थप्ने भएको छ । नेपाली सेनाले ११ वटा हवाई साधन थप्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
११ वटन साधनमा अमेरिकी अनुदानमा चार वटा स्काई ट्रक, सेना आफैले ६ वटा हेलिकप्टर र एयटा जहाज किन्न....
​गृह मन्त्रालयले बाढी पीडितलाई दिने भयो ७० रुपैयाँ
काठमाडौं । प्रभावित क्षेत्रका नागरिकलाई महिना दिनसम्म खाना खर्च भन्दै गृह मन्त्रालयले बाढी दैनिक ७० रुपैयाँ दिने प्रस्ताव गरेको छ । शुक्रबार गृह मन्त्रालय सिंहदरबामा पत्रकार सम्मेलन गरेर गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले बाढी प्रभावित ३० जिल्लाका नागरिकलाई प्रति व्यक्ति दैनिक ७० रुपैयाँ दिने प्रस्ताव गरेको जानकारी....
चार महिलासहित १२ जनामा डेंगु फेला
विरगञ्ज । पार्सा जिल्लामा डेंगु ज्वोरोका कारण चार महिलासहित १२ जना बिरामी परेका छन् । रोगबाट प्रभावित हुनेमा बारा प्रसौनीकी २५ वर्षीया सलिमा खातुन, वीरगञ्जकी २४ वर्षीया सुधाकुमारी, विरुवागुठी पकडियाकी ३५ वर्षीया छटिया देवी र २१ वर्षीया पूजा कुमारी रहेका छन्।
त्यस्तै बिरामी हुनेहरुमा....
गणतन्त्र दिवसको उपलक्ष्यमा प्रदेश १ प्रमुख ‘प्यासी’ले दिए शुभकामना
रौतहटमा क्वारेन्टिन निर्माण गर्ने विषयमा झडप हुँदा प्रहरीद्वारा १२ राउण्ड हवाइ फायर
पानी जमेको खाल्डोमा डुबेर १६ महिने बालकको मृत्यु
चट्याङ लागेर एक बालकको मृत्यु, एक जना घाइते
रुकुम पश्चिम घटनामा बेपत्ता थप एक युवाको शव फेला, एकजना अझै बेपत्ता